DAAWO VEDIO: Ciidamadii Ugu Badnaa ee Somaliland Oo Hargeysa Kasoo Baxay iyo Duulaan Halis ah Oo ku Wajahan Puntland | Marqaan News Agency
DAAWO VEDIO: Ciidamadii Ugu Badnaa ee Somaliland Oo Hargeysa Kasoo Baxay iyo Duulaan Halis ah Oo ku Wajahan Puntland
Published on January 11, 2018 by dahir · 18 Comments
atoore ma wax baa u dhiman mise hurduu kasoo kacay.
war heedhe ninkii wax ka maqan yihiin baa dagaalama, nimanka iidoor woxoodiina waa haystaan waxa ay hada u dagaalamayaana waa “surplus”
adi oo wax kaa maqan yihiin baa car ha la ii imaadoda haya;
daafac buu ku ururayaa ninka iidoor maadaama aan waxba ka maqnayn-period!
Khaatumo Somaliland ayaa dhulkeedii qabsatay sida uu noo sheegay madaxweyne ku xigeenka Khaatumo:
Gaas waa uu baxsadey.
Adigu horaad u soo cuntay intii kula dhalatay iyo dariskiiniiba.Dhurwaayahoow ma adigaaba ka mida dadka caadigaa.Haddi ad leedahay caqli iyo aqoon miyaad xamar ka furan lahaydeen kawaanka dadka ad ku qashaan.War ma hadal baa kuu eg dad qal yahoow afarta Qoob leh.War maxaad ku faanaysaa oo ad haysataa.Waxaad haysata ceeb,cayr,aakhiro waa iyo xaaraam ad ku naaxday.Intaas oo wada xun midkaliyu aniga ima soo gaarin Allaah (swt) mahaddiis.War ma sheegi kartaa wax ad ku fiican tahay Waraabe yahoow dad qalkaa?War ma hadal baa maanta kuu yaal adigoo bilo ka hor labo saacadood ku qashay 530 qof oo an cidna wax u dhimin.Waxaad tahay Warabe dadoow.Nimanka ad u heelan tahay ee reer hargeeysa waxay kuu yaqaaniin iyo saad ugu heelan tahay way kala fog yahiin miskiin yahooow Huutuugaa.
To Reer Soomaaliland
Codsi: Dagaalka ha la joojiyo.
Walaalayaal waxaan idin ka codsaneynaa in uu dagaal dhicin sababtoo ah annaga haddaanu nahay reer Koonfur in Majeerteen Puntland ku soo celino waqti dheer iyo juhdi badan baan ku bixinay hadda hadii aad dagaal ku qaadiin haddana Majeerteen dib ayuu Xamar u imaanayaa taasna nama qabato marka waxaan idiin ka codsaneynaa in uu dagaal meesha ka dhicin.
Annaga reer Xamar waxaan dhihi jirnay Reer Gaalkacyo Booto iyo Faan laguma gaaro ma maanta ayaa qiratay adigana in lagaa Booto iyo Faan badan yahay waa aakhiro zamaan. KKKKKKKKK
Waryaada Sannad Cusub baa noo bilawday ee arrinta sidaan ka daaya.
All Marqaan News ma sawiradii sannad guuradi 18 Maay miyaa???? KKKKKKK
Waa hadyed insha allaah waanu qanimaysanaynaa hadalkaa iga qora
AYAAN WAAN KU
OK MA AH.
Way faaneen tukaraq iyo kastamkaagiina iyagaa haysta mxd samayn kartaa wlhi in garowe lagu murmi hadaad sida naagaha u hadasho
Reer hargeeysa labo laguma gaaro.
Labadaas oo kala ha faan iyo booto been ah.Waayo markasta oo ay faanayaan waxay soo masawiraan Baabuurkaas oo an soomaaliya oo dhan ka jirin.Faan bilaasha looma baahna ee ninkii dagaal u bukaa ha is keeno jiida hore.Faan iyo hadalada Qayilaada macne ma suubinayaan.
Kkkkkķ faan badna kuwan iyo kan mesha faanka ku soo qorayo